Joogista Finland ogolaansho la'aan - InfoFinland
Nolosha Finland > Xaaladaha dhibka > Dhibaatooyinka Ogolaansha deganaanshaha > Joogista Finland ogolaansho la'aan
Haddii aad joogitaanka Finland dartiis ugu baahan tahay dal ku gal ama ogolaanshiyaha joogitaanka laakiin aadan heysan waxaad Finland ku joogtaa sharci daro. Magangelyo doonka xaq ayeey u leeyihiin inay joogaan Finland ayagoo heysan dal ku gal ama ogolaanshiyaha joogitaanka ilaa ka baaraandega codsigooda magangelyo doonku uu qaadanayo.
Inkastoo aad si sharci ah ku timid Finland, joogistaada Finland waxay isu bedeli kartaa sharci daro tusaale ahaan marka aad joogto dalka inkastoo aadan helin ogolaanshiyaha joogitaanka ama dal ku gal ama uu dhamaaday waqtigi uu shaqeynayay ogolaanshiyahaada joogitaanku.
Macluumaadka sida aad ku heli karto ogolaanshiyaha joogitaanka Finland waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi U soo guurista Finland.
Xaaladaha qaar marka lagu jiro oo aadan u safri karin dalkaadi ama dalka aad sida rasmiga ah u deggan tahay, sababo ka dhashay xadaymaha safmarka fayraska korona dartiis, waxaad codsan kartaa sharciga deganaanshaha ku meelgaarka ah.
Faahfaahin dheeraad ah oo kus aabsan sharciga deganaanshaha ee ku meelgaarka ah iyo saameynta fayruska korona ku leeyahay sharciyada deganaanshaha ka aqri bogga InfoFinland Fayruska Korona iyo u soo guuridda Finland.
Sharciga deganaashaha kumeelgaarka ah ee loogu talagalay xayiraadaha uu sababay fayruska KoronaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Caawimaad iyo talo-siin
Kaalmo cunto iyo deegaan
Waxaad xaq u leedahay dejin degdeg ah iyo kaalmo cunto,haddii aadan heysan heysan lacag aad ku gadato cunto ama meel aad ku hoyato. Deginta degdegga ah waxaa qabanqaabiya degmooyinka, kaniisadaha iyo ururada qaarjiid.
Ururka la talinta qáxootiga ayaa la-talin sharci oo lacag la’aan ah siiya dadka dalka u soo guuray ee aan warqadaha laheyn. La-talinta waxaa lagu helayaa nambarka telefoonka 045-237 7104 (Isniin kasta saacadda 14- 16). La-talinta waxaa bixinayaa sharciyaqaan. Waxaad sidoo kale kula xiriiri kartaa emayl: paperittomat(at)pakolaisneuvonta.fi. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogagga shabakadda ee la-talinta qaxootiga.
Daryeeka bukaanka Sairaanhoito
Haddii aad jirrato ama aad dhaawacanto, waxaad xaq u leedahay in aad ka hesho daryeel caafimaad oo degdeg ah daryeelka caafimaadka dadweynaha, tusaale ahaan rugta caafimaadka ama isbitaalka. Sida caadiga ah waa in aad adigu iska bixisaa qarashka daryeelka.
Carruurta iyo dumarka uurka leh waxey ka helaan Hdelsinki, Turku, Tampere iyo Espoo adeegyo caafimaad oo lamid ah kuwa ay helaan deganayaasha kale. Waa in ay ka bixiyaan daryeelka lacag lamid ah kuwa ay deganayaasha kale bixiyaan.
Global Clinic waa kiliinikada, taasood ka heli kaaro caawimo iyo talosiin dhakhtar ama kalkaalisada caacimaadka, haddaad ku nooshahay Finland adoon u heysan wax ogolaansho ah. Kilinikada Global Clinic waad aadi kartaa haddii aadan xittaa u baahneyn daryeel bukaan oo degdeg ah. Adeegyada Global clinic waxaad ka heleysaa degmooyinkan
Waad kula xiriiri kartaa teleefoon ama iimayl teleefonka waxaa qabanaya kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka, Warbixintooda waxaad ka heleysaa boga Global Clinic.
Adeegyada Global Clinic. Halka ay ku taalo kiliinikada iyo waqtiyadey furan tahay lama baahiyo.